एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम छ, चाँडै बन्ने एक ठूलो प्रतिद्वंदी पछि यसको रिलीज । एरिक्सन, एलजी, नेक्सस र अन्य मोबाइल फोन कम्पनीहरु बाहिर आउँदै छन् लगातार संग सुसज्जित स्मार्टफोन ओएस. यो मोबाइल सञ्चालन प्रणाली यसको आफ्नै शेयर को नोकसान र एक तिनीहरूलाई को छ नसक्नुको समर्थन गर्न सबै भिडियो खेल्न । निस्सन्देह, तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ चलचित्रहरू हेर्न, क्लिप, भिडियो डाउनलोड, अरू र सबै छ तर प्रणाली छैन सबै स्वीकार स्वरूप छ । भिडियो असंगत छन् परिवर्तित गर्नुपर्छ पहिलो सुनिश्चित गर्न यो फाइल ढाँचा द्वारा समर्थित छ. यस गर्न, तपाईं को आवश्यकता हुनेछ एक भिडियो कंवर्टर लागि विश्वसनीय, छिटो र कुशल छ । सुविधा कार्य, हामी प्रस्तुत गर्दै छ. तपाईं सबै भन्दा राम्रो मुक्त अनुप्रयोगहरू सबै भन्दा राम्रो-ज्ञात बजार मा. भन्दा बढी लाख प्रतिष्ठानहरु, भिडियो रूपान्तरण उपयोगिता भन्दा व्यावहारिक हुन सक्ने डाउनलोड कहिल्यै भने तपाईं यो रमाइलो गर्न प्रेम देखि भिडियो विभिन्न स्रोतहरू । मा मूल्यवान छ । तारा प्रयोगकर्ता को बहुमत द्वारा, यस आवेदन गर्छ, वास्तवमा, कि हो । साथै, सफ्टवेयर को पुराना संस्करण मा विशेष. र उच्च मा । यो अनुप्रयोग भिडियो कंवर्टर एन्ड्रोइड चिन्न सक्नुहुन्छ लगभग सबै भिडियो स्वरूप यस्तो, र अधिक. यो अनुप्रयोग प्रयोग भिडियो रूपान्तरण एन्ड्रोइड रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं एक भिडियो अर्को स्वरूप, उद्धरण देखि अडियो भिडियो घटाउन र भिडियो फाइल आकार छ । र यो पनि तपाईं गर्न अनुमति दिन्छ फाइलहरू रूपान्तरण संरक्षण मूल गुणवत्ता र मिलाएर भिडियो सेटिङ अनुसार आफ्नो इच्छा छ । मिडिया स्टूडियो, खाली, परिवर्तित गर्न वर्तमान एक पलिश इन्टरफेस र सफा बनाउँछ जो एक अद्भुत आवेदन छ । यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ र समर्थन विभिन्न भिडियो प्रारूप अर्थात् सांसद, आदि, यो लोकप्रिय स्वरूप भिडियो, अडियो निकाल्न देखि भिडियो, सम्पादन, भिडियो, र समर्थन को कार्यान्वयन को मोड मा कार्य पृष्ठभूमि वाहेक संग सुसज्जित छ एक सुविधाजनक बटन लागि साझेदारी मा एक क्लिक. निःशुल्क छ, यस आवेदन को भिडियो कंवर्टर लागि मोबाइल द्वारा समर्थित छ विज्ञापन । यो योग्य समावेश गर्न आफ्नो ग्याजेटको मा. यो ओगटेको एक फाइल आकार सभ्य छ । एमबी र संग संगत छ, एन्ड्रोइड फोन प्रयोग संस्करण । र उच्च मा । भिडियो रूपान्तरण मुक्त छ कि एक आवेदन हुन सक्छ धेरै राम्रो प्रदर्शन रूपान्तरण आधारभूत भिडियो । बस अरूलाई जस्तै, यो पनि निकाल्न अडियो रूपमा, पुनःबहाली को फिलिमहरु र निकाल्न एक भिडियो फ्रेम-द्वारा.
यो आवेदन मुक्त भिडियो रूपान्तरण लागि एन्ड्रोइड छ मूल्यांकन. स्टार र यो संग पूर्णतया संगत छ, एन्ड्रोइड मोबाइल फोन प्रयोग संस्करण । र उच्च मा । यो हुन सक्छ सबै भन्दा राम्रो भिडियो किनभने यो प्रदान गर्दछ एक फाइल परिवर्तन धेरै आधारभूत छ, तर तैपनि, प्रयोगकर्ता पाउन सक्छ यसको इन्टरफेस प्रयोग गर्न सजिलो को लागि पर्याप्त राम्रो साधारण कार्यहरू ।, यसको छ । सुविधा हुन सक्छ, एक निराशा, तर यो अनुप्रयोग मात्र उपलब्ध छ भएकोले धेरै हालै गुगल प्ले मा. डेवलपर्स अनुसार, यो उपकरण सक्छन् दुवै डाउनलोड र भिडियो रूपान्तरण गर्न विभिन्न स्वरूप छ । हाल यो समर्थन को एक विस्तृत विविधता स्वरूप सहित, डीभिडी, जीपी, र धेरै अन्य । यो प्रस्तुत इन्टरफेस सुखद उपस्थिति छ । को संयोजन बैजनी र ग्रे. यो बटन व्यापक समर्थन गर्न पर्याप्त यो छ र यसको प्रयोग एकदम सरल छ.
यो लागि सिद्ध छ
फोन प्रयोग को पहिलो संस्करण. अरूलाई विपरीत जो मांग पर्याप्त उच्च छ लागि यो सञ्चालन प्रणाली, यो अनुप्रयोग मा चलान गर्न सक्छन् संस्करण. र उच्च मा । त्यस्तै, यो धेरै प्रकाश संग जो यो बनाउँछ सिद्ध को लागि ग्याजेटहरू सीमित स्मृति र संसाधन शक्ति छ । कुशल रूपान्तरण को भिडियो मा. कि अलग, यो सफ्टवेयर छैन विशेषताहरु महान् वा आधुनिक विशेषताहरु को भिडियो सम्पादन. यो अनुप्रयोग लक्ष्य लिएको रूपान्तरण गर्न आधारभूत फाइल छ, तपाईं यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं पुरानो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट संग चश्मा बरु पुरानो छ । यदि आफ्नो मोबाइल फोन समर्थन गर्दैन भिडियो प्रारूप तपाईं पढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईं सधैं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ को एक भिडियो कन्वर्टर्स लागि सुझाव माथि बनाउन यो संगत छ । तपाईं याद हुनेछ, सबैभन्दा को उपयोगिता सिफारिश यस पोस्ट मा छैन भने, सबै अतिरिक्त सुविधाहरू साथै रूपान्तरण को आधारभूत भिडियो फाइल. एक पटक फेरि, केही अनुप्रयोगहरू समावेश विज्ञापन अरूलाई बिना पूर्ण छ । यो पूर्णतया बुझ्ने छ भन्ने तथ्य दिइएको यी अनुप्रयोगहरू छन् मुक्त. आफ्नो आवश्यकता मा निर्भर, आफ्नो विकल्प असीमित छन् जब तपाईं आवश्यक एक भिडियो हेर्न छ कि छैन द्वारा समर्थित एन्ड्रोइड
← र अनुभव छ । सेक्सी डेटिङ फ्रान्स डेटिङ सेक्स सेक्स डेटिङ मुक्त वयस्क सेक्स च्याट - डेटिङ वयस्क सेक्स डेटिङ फ्री सेक्स महिला शरारती
अनलाइन भिडियो च्याट अनुप्रयोग →